Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay Beledweyne
Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay Beledweyne
Dagaal kooban ayaa afaafka hore ee Xarunta Maamulka Gobolka Hiiraan waxaa uu Maanta ku dhexmaray Ciidamo katirsan kuwa ilaalada Madaxda Hir-Shabeelle ee ku sugan Xerada lamagalaay iyo Ciidamo kamid ah kuwa ilaalada qaar kamid ah musharixiinta kuraasta Golaha Shacabka ee taalla Beledweyne.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Afaafka hore ee Xerada lamagalaay ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka bilaabeen maleeshiyaad ku labisan Tuutaha Ciidanka, kuwaas oo ka careeysan in Shaqsi loo xiro Kursiga HOP#010 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdirisaaq Maxamed (Jindi).
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen laba Ruux oo mid Shacab yahay iyo hal Askari halka ay ku dhaawacmeen Saddex kale oo kamid ah dhinacyada dagaalamay, kuwaas oo la geeyay dhaawacooda Ibitaalka Magaalada Beledweyne.
Xaaladda Magaalada Beledweyne ayaa Maanta aad u kacsan, waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada beledweyne laga dareemayay saan saan dagaal kadib markii Madaxweynaha Hir-Shabeelle & kuxigeenkiisa ay isku khilaafeen hanaanka loo marayo doorashada kuraasta taalla Magaalada Beledweyne.
Previous articleAl-Shabaab oo Weerar ku Qaadday Degaanno KENYA ah.
Next articleIMF oo Jareysa Kabka Miisaaniyadd ay na Siiyaan Somalia iyo Beentii Beyle oo Baanka Timid.
Abiy iyo Farmajo oo Khadka Telefoonka ku Wada Hadlay.